Sidee loo soo qaadaa sawirrada Google Earth - Geofumed
Nofeembar, 2007 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Waa suurtogal in la soo dejiyo hal ama dhowr sawirro oo ka socda Google Earth, qaabka masaajidka. Si taas loo sameeyo, kiiskan waxaan arki doonaa arji la yiraahdo Khariidadaha Khariidadaha Khariidadaha Google ee cusub ee la cusbooneysiiyey.
1. Qeexida aagga.
Waxaa haboon in lagu sameeyo Roobka a in AutoCAD ama ArcGIS, ka dibna exportes in KML, sababta oo ah waxa aad ogolaanaysaa gacanta wanaagsan haddii aad downloads waaweyn.
2. Galitaanka xuduudaha
Nidaamka jirtey darafyadiisa Rubuca oo dhan aagga in aanu xiiso u dajinta, waxay u baahan tahay 4 galaan xogta darajooyin jajab tobanle, ma in wadataa UTM, aynu hore ku hadlay sida loo qaabeeyey taas oo ku jirta Google Earth. Nidaamka waxaa kale oo uu leeyahay shaandhayn heerar ah / daqiiqado ah oo ah darajo dherer ah 'menu'
Marka aad bixiso isku-duwayaasha, waa inaad gashaa zoom, tani waa heerka ujeedka, in qiyaasta qalanjabinta ah ee ku yaala dhinacyada fogaanta ee Khariidadaha Google; habka ugu sareeya waa 18x (oo ah nooca sharifiiga ah ee 13x loo oggol yahay)
Kadibna waxaad soo gashaa tirooyinka xawilaadda (threads), ugu badnaan waa 64 oo dooro qaybta galka ee muuqaalka. Kuwaas waxaa lagu keydin doonaa qaabka bmp, iyo foormo qoraal ah oo leh magaca mashruuca kaas oo ku jira iskudhafyada sawir kasta.
3. Ku biirida sawirada masaajidka
Nidaamka wuxuu leeyahay viewer si uu u arko dhammaan sawirada hal, tan waxaa lagu sameeyaa adigoo furaya mashruuca «faylka / mashruuca furan»
Si ay iyaga ugu midoobaan galay image hal a aad samayn leh "qalab / images isu geeyo", dooran mashruuca iyo caga of file keentay. Marxaladani waxay ku baabbi'iyee karaa khayraadka la taaban karo haddii tirada images waa weyn yahay, waxaan ku talinaynaa in aad samayn baaritaanka la xaddi yar si aad u ogaato waxqabadka kooxda, maxaa yeelay, xataa haddii aad RAM waa heer sare ah ku yeelan karaan waxaa u dhigi waayo, barnaamijyo badan oo lagu rakibay ama si khaldan uninstalled.
4. Hirgalinta muuqaalka mooska la xidhiidha
Xasuuso in sawirka uu ku jiro qaab .bmp, si aad u dheelitirto waxaan kugula talinayaa in aad aragto posts ka hor oo aan ka hadlay sida loo sameeyo AutoCAD, Microstation y kala cayncayn ah.
5. Taxadar ama aragti
Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo iyo xadhiga baahsan, maxaa yeelay, Google mamnuucay aad ip in la ogaado siideeyn oo xiriir ah goobaha ku hareeraysan. Haddii ay taasi sitema aad u soo sheegto, Google qaadataa 24 saacadood si loo soo nooleeyo ip ah mamnuucay laakiin waad bedeli kartaa oo sii (in la beddelo waa in Connections Network tag, xaq-riix xidhiidh firfircoon, guryaha, TCP / IP oo waxaan kaa dhigi ip ka duwan). Waxay sidoo kale la badbaadin karaa sida mashaariicda la kordhiyo .gmid si downloads la qayb ahaan lagu sameyn karaa, joojinta fadhiga oo u sii ka dib markii hakin ah.
Haddii ay dhacdo in xiriirkaaga uu leeyahay proxi, waa inaad u rakibtaa 'Options'
Ruqsadu waa shareware, oo kaliya ayaa soo dejisan kartaa 13x, liisanka lacag-bixinta ah wuxuu u qalmaa $ 25
Tani download waa sawirada, ma qaadi kartid sawirada ama sawirada unugyada
Haddii aad rabto inaad ogaato sida saxda ah ee sawirada Google Earth adigoo iskiis u furan
Halkan ayaad soo dejisan kartaa Khariidadaha Khariidadaha Khariidadaha Google
Maxay, qof arkay ari kale oo sameeya wax la mid ah?
Post Previous«Previous Ka beddel GoogleEarth ilaa AutoCAD, ArcView iyo qaabab kale
Post Next Buugga Manifold ee IsbaanishNext »
8 Jawaab oo ku saabsan "Sidee Sawirrada laga soo galo Google Earth"
Galab wanaagsan waxaad isticmaali kartaa CAD-Earth, oo leh qalab autocad ama briscad madal, soo dejiso sawir ka socda Google Hearth, iyo sidoo kale sawirro laga soo qaatay taariikho kale oo horeyba loo qoondeeyay.
Waxaan hore u tijaabiyay codsigii laakiin waxa kaliya oo i abuuraa sawirka 1 iyo mid madhan. maxaa dhici kara
Barnaamijka kale ee taas sameeya waa PlexEarth
Qalab kale oo tani waa tan Plex.Earth
Waxa aad sameyneyso waa faylka gaaban ee kml, oo sidan ayaad awood u yeelan doontaa inaad u furto Google Earth
Dhawaan waxaan helay naftayda boggan cajiib ah, kaas oo aan ka shakiyey shaki ka mid ah; laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxoogaa badan oo ku saabsan sida loo soo saaro mesh ka soo autocad ilaa google eart.
Ogsoonow: nooca autocad ee aan ka shaqeeyo waa: autocad 2007 iyo 3D 2008
Merry Adrian, Stitchmaps ayaa sidoo kale jira, waxay qabataa hawl isku mid ah.
Nasiib xumo goobta waa la joojiyay ... ma waxaa jiri doona barnaamij kale oo tan lagu sameeyo?